अक्षय कुमार, अजय देवगन र सनी देओल किन जाँदैनन् फिल्मी पार्टीमा ? थाहा पाउनुहोस्:
Homeसमाचारअक्षय कुमार, अजय देवगन र सनी देओल किन जाँदैनन् फिल्मी पार्टीमा ? थाहा पाउनुहोस्:
September 22, 2020 admin समाचार 10817
ड्र’ग्सको छायाले जबदेखि बलिउड’लाई आफ्नो चपे’टामा पारेको छ, तबदेखि फिल्मी पार्टीको कुरा स’तहमा आउन थालेको छ जसमा ड्र:ग्स पनि बाँडिन्थे । र’क्सीले त कानूनी रुपमा मान्य’ता पाएको छ तर कुरा रक्सीबाट अघि बढेर ड्र’ग्ससम्म पुगेको छ ।
सुशा’न्त सिंह राजपूत र रिया च’क्रवर्तीको मामिलामा ड्र’ग्सले एक नयाँ मोड दिएको छ र अनुसन्धा’न एजेन्सी ती फिल्मी कला’कारसम्म पुगिसकेको बताइएको छ जसले ड्र’ग्सको नशामा चुर भएर आफ्नो सफलताको उत्स’व मनाइरहेका छन् वा आफ्नो अस’फलताको पी’डालाई बिर्स’ने कोसिस गर्छन् ।
फिल्मी पा’र्टी निकै अघि देखि नै आक’र्षणको केन्द्र रहेको छ किनभने यसमा सर्वसाधारणको लागि कुनै स्थान हुँदैन । यस्ता पार्टी वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । राज कपूर, देवानन्द र दिलिप कुमा’रको ज’मानमा कुनै नयाँ फिल्मको घोष’णा गर्ने बेला यस्ता पा’र्टी दिने गरिन्थ्यो । त्यसप’छि फिल्मको सफलता मना’उन पनि पार्टी नै दिने गरिन्थ्यो ।
यस्ता पार्टीको चौ’तर्फी चर्चा हुन्थे । प्रतिद्वन्द्वी पनि यस्ता पा’र्टीमा समावेश हुन्थे । क्रमशः यस्ता पार्टीमा विकृति भित्रिन थाल्यो । ड्रग्स समावेश गरिएन तर र’क्सीको नशा’पछि थुप्रै मानि’सहरुको मुख’बाट उनीहरुको मनको मैलो पोखियो र बिस्तारै यी पार्टीले आफ्नो स्वरुप गुमाउन थाल्यो । आज’काल फिल्मी पार्टी कम हुन्छन् किनभने समूह बनेको छ । एक–अर्काको समूहमा जान धे:रैलाई मन पर्दैन ।
अजय देवगन, अक्षय कुमार र सनी देओलजस्ता अभिनेताले त्यतिबेला फिल्म इन्डष्ट्रिमा क’दम राखेका थिए जब पार्टी अत्यधिक हुने गर्दथे । दैनिक दुई–तीन पार्टी हुन्थे । यी तीनै कला’कारले फिल्म उद्योगमा निकै तीब्र गतिमा आफ्नो स्थान बनाएका थिए त्यसैले हरेक पार्टीमा उनी’हरुको माग हुन्थ्यो । सुरुमा उनीहरु केही पा’र्टीमा देखिए पनि तर उनीहरु तत्काल यसबाट टाढा भए ।
सनी देओला पिता धर्मेन्द्र पिउने–पिलाउ’ने कुरामा शौ’खिन छन् तर सनी सधैं र’क्सीबाट टाढा भए । उनी पार्टीमा नदेखिएका होइनन् तर उनको हातमा कहिले पनि र:क्सीको गिलास भेटिएन । त्यसैले मानि’सहरुसँग उनको राम्रो मेलमिलाप भएन ।
एक अन्तर’वार्तामा उनले य’सबारे भनेका थिए, ‘रक्सी पिएपछि मानिसहरु जे पनि भन्थे । उनीहरुको लेभल र मेरो लेभल म्याच हुन सक्दैनथ्यो । केही बेर’अघि उनीहरु जसको प्रशंसा गरिर’हेका हुन्थ्यो केही बेर जमेपछि उनीह’रुको खेदो खन्ने गर्दथे । म के कुरा गरुँ भनेर मला’ई थाहा नै हुँदैनथ्यो त्यसैले मैले पार्टी’मा जान नै छोडिदिएँ ।’
अक्षय कुमा’रलाई यदा कदा केही पार्टीमा देखि’न्छ तर उनी जति छिटो पार्टीमा जान्छन् त्यति नै छिटो निस्कन्छन् । उनको फिल्मको सफलता मनाउन आयोजना गरिए’को पार्टी छ भने उन’लाई केक का’टेपटि देख्न मुश्किल हुन्छ ।
अक्ष’यलाई पनि रक्सी पि’उन मन पर्दैन । उनी राती ९ बजे नै सुतिसक्छन् । त्यसैले अबेर राती हुने पा’र्टीमा उनलाई देख्न सकिँदैन । अक्षय का’ममा विश्वास गर्छन् र यस्तो प्रकारको पार्टी’लाई उनले स’मयको बर्बादी भन्छन् ।
अजयलाई पिउन मन’पर्छ तर उनी केही विशेष साथी हरुसँग मात्रै पिउने गर्छन् । पार्टीमा सबैको अगाडि रक्सी पिउन उनलाई मन पर्दैन । उनी अन्तर्मुखी स्वभा’वका छन् त्यसैले चाँडै घुल’मिल हुन सक्दैनन् । अपरिचितसँग उनलाई भिन्न मह’सुस हुन्छ । कुरा का’ट्नु उनको स्वभाव होइन । अजय राती ९ बज्दा नब’ज्दै घर पुग्न चाहन्छन् । – रातोपाटी बाट
March 1, 2021 admin समाचार 4056
March 25, 2021 admin समाचार 3644
युट्यूवर हिमेशमाथि दिनदहाडै हमला, स्थानीयहरु यसरी हिमेश माथि जाइलागे (भिडियो सहित)
December 12, 2020 admin समाचार 5832
पछिल्लो केही वर्षयता सल’बलाएका युट्यूव च्यानलहरु धेरैले राम्रा काम गरेका छन् भने केहीले केवल आफ्नो फा’ईदाकोलागी रिर्पोट बनाएका छन् । जस्ले गर्दा समाजमा सहज वाता’वरण गराउनुको साटो असहज वातावरणको श्रृज’ना गरेको पाईन्छ । तर त्यही